Zimbabwe iri kukurudzirwa kuti igare yakagadzirira kuwedzera zvakanyanya kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheCovid-19 zvichitevera kusamira zvakanaka kwezvinhu muSouth Africa panyaya yekurwisa chirwere ichi.
Nemusi weSvondo, mutungamiri wenyika yeSouth Africa VaCyril Ramaphosa vakasimbaradza hurongwa hwekuyedza kudzivirira kupararira zvakanyanya kwechirwere charura pasi rose ichi. Vakti vanhu havachabvumidze kutenga doro uye kufamba vasina kuzvidzivirira mhuno nemuromo.
Dunhu reGauteng iro rine zvizvazvarwa zveZimbabwe zvakawandisa muSouth Africa ndiro rave nevanhu vakawandisa vabatwa nechirwere cheCovid-19 muSouth Africa.
Nyika iyi ndiyo ine vanhu vakawandisa muAfrica vabatwa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana maviri ane makumi manomwe nematanhatu kana kuti 276 thousand. Vanhu vafa muSouth Africa vadarika zviuru zvina zvine zana nemakumi masere nemanomwe kana kuti 4, 187.
Mumwe Chiremba muguta remuJohannesburg, Dr Shepard Maphisa, vaudzaStudio 7 kuti, kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nedenda reCovid-19, muSouth Africa, kuri kukanganisawo nyika yeZimbabwe mukurwisana chirwere ichi. Vakurudzira hurumende yeZimbabwe nevatori venhau, kuti vazivise vanhu zvizere nezvechirwere ichi.
Dr Maphisa vakurudzira nyika yeSouth Africa, neZimbabwe, kuti dzivhare muganhu yadzo, kuitira kuti pasave kana nemunhu mumwe chete zvake anoshanya kana kufamba famba pakati pemiganhu iyi
Vatiwo kupinda nekubuda kuri kuitwa nemhuri yeZimbabwe munyika ichibva muSouth Africa, ndiko kuri konzera kuti denda reCovid-19 ripararire zvakanyanya mberi munyika uye pasina zvikwanisiro zvakakwana zvekurirwisa.
Asi chimwewo chizvarwa cheZimbabwe, charamba kudomwa nezita, icho chinogara munzvimbo yeKempton Park, kumabvazuva kweguta reJohannesburg chinoti hachi bvumirane nekurudziro iyi.
Dr Maphisa vatiwo vane chokwadi kuti vanhu vari kufa kana kubatwa nechirwere ichi muZimbabwe, vakawanda kudarika huwandu huri kupiwa nehurumende kana huri kuburitswa munhau.
Mudzidzisi pachikoro chepamusoro cheTswane Univeristy of Technology, Doctor Ricky Mkonza, vanoti danho ratorwa nenyika ye South Africa, richakonzeresa kusagadzikana kwezvinhu muZimbabwe.
Vaenderera mberi vachiti nyika ye South Africa inofanira kuvhura maziso sezvo pachine huwandu hwevanhu vari kufamba madiro pakati penyika yeSouth Africa neZimbabwe
Imwewo nyanzvi mune zvehupfumi, Dr Eddie Mahembe vanoti nyika dze South Africa ne Zimbabwe dzave panguva yakaoma.
VaMahembe vatiwo hupfumi hwe nyika yeSouth Africa hukanganisika zvinokonzerawo matambudziko kuZimbabwe .
Hapana ari kuziva parizvino kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvafa kana kuti zvabatwa nechirwere checoronavirus zvingani muSouth Africa. Asi panyika dzose, vanhu vakawnada vari kubva kuSouth Africa ndivo vari kubatwa nechirwere ichi pavanodzokera kuZimbabwe.
Bepanhau reChronicle svondo rapera rakati vamwe vanasikana vaviri vemumba imwe chete vekuBulawayo vakafa nekuda kwechirwere ichi muSouth Africa.
Studio 7, haina kukwanisa kuwana mhinduro kubva kune mumiririri weZimbabwe muSouth Africa, VaDavid Hamadziripi kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvingani zvabatwa nechirwere ichi sezvo vati vange vakabatikana.
Kune zvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvingangosvika kana kupfuura mamiriyoni matatu, zvinogara muSouth Africa, nekuda kwemamiriro asina kunaka akaita hupfumi pamwe nezvematongerwo enyika muZimbabwe.